Jacuzzi la buufin karo - Ma taqaanaa dhammaan faa'iidooyinkiisa waaweyn? | Bezzia
Jacuzzi la buufin karo: Ma ogtahay waxtarkeeda weyn
Susana godoy | 07/04/2021 16:00 | Guriga
Haysashada jacuzzi la buufin karo waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan gurigeenna iyo dabcan, beerteenna. Haddii aan leenahay aag labada dhinac ah, waxaa la joogaa waqtigii laga fikiri lahaa sida loo qurxiyo iyo waxa ka fiican in lagu sameeyo iyada oo fikradda ah aan maanta kuu soo bandhigi doonno oo aad adigu aad u jeclaan doonto.
Sababtoo ah haysashada jacuzzi waa riyada weyn ee dad badan. Laakiin maahan oo keliya in la yiraahdo waan haysannaa, laakiin maxaa yeelay runti waxay leedahay faa'iidooyin waaweyn oo ay tahay inaan tixgelinno. Kaliya sidan, waxaad ka nadiifin doontaa shakiga ah inaad iibsaneyso iyo inkale, laakiin waxaan horeyba kuugu sheegeynaa in qaraarku uu noqon doono midka ugu fiican adiga iyo qoyska oo dhan. Soo ogow!
1 U macasalaameyso walwalka mahadsanid jacuzzi la buufin karo
2 Waxaad yareyn doontaa xanuunka murqaha
3 Waad isku ururin kartaa ama kala bixi kartaa markasta oo aad rabto
4 Muuqaalka maqaarku wuu fiicnaan doonaa
5 Daaweynta gaarka ah ee arthritis
U macasalaameyso walwalka mahadsanid jacuzzi la buufin karo
Jacuzzi iyo spa labadaba, waa nooc barkad ah oo leh goobooyin daaweyn leh. Marka mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee iyaga ka mid ah ayaa ah inay si weyn u yareyn karto buufiskaaga. Xaqiiqdii ma jirto maalin aad si buuxda u nasan karto. Tani waxay jirka ka dhigeysaa mid had iyo jeer kacsan shaqada, guriga iyo dhibaatooyin kale oo badan awgood. Marka, maydhashada udhaxeysa goobooyinku waxay dejineysaa dhamaan qeybaha qandaraaska qaatay waxaadna dareemi doontaa gargaarka weyn ee ka yimaada ka tagida xiisad aad u badan gadaal. Wali ma isku dayday?
Waxaad yareyn doontaa xanuunka murqaha
Kahor intaanan xusin culeyska iyo hada wax laxiriira ilaa xad. Sababtoo ah xanuunku sidoo kale wuxuu noqon karaa dhibaatooyin taxane ah oo soo kordhay. Gaar ahaan hadday yihiin muruqyo, waxaad caafimaad kuheli doontaa jacuzzi la buufin karo. Tan iyo tan tan waxay u noqon doontaa mid kasta oo ka mid ah diyaaradaha ka soo baxa iyada oo leh dhammaan sumcadda. Hubso taas iyadoo dhaqaajineysa wareegga, waxay dejin doontaa aagga oo aad ayey u xanuun yar tahay inta aan ka fikirno. Tani waa qayb ka mid ah isku darka biyaha diirran iyo diyaaradaha firfircoon. Marka kaliya daqiiqado yar maalin kasta, waxaan si dhakhso ah u ogaan doonnaa isbeddelada xanuunadan.
Waad isku ururin kartaa ama kala bixi kartaa markasta oo aad rabto
Waa waxa ku wanaagsan wax kasta oo la soo ururin karo oo la kala qaadi karo, marka xaaladdan sidoo kale lagama tegayo sidoo kale. Waxaa laga yaabaa xilliga guga ama xagaaga had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad ka fikirto inaad ku dhejiso banaanka, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waad kala bixi kartaa illaa ogeysiis dambe. Waxaan ka dhihi karno waa wax ficil ah oo ka dhigaya inay yeelato wax badan oo la jaanqaad ah, sida aan jecel nahay. Sidaa awgeed, waa mid kale oo ka mid ah qodobbada qumman ee la tixgelinayo.
Muuqaalka maqaarku wuu fiicnaan doonaa
Sababtoo ah dhammaan faa'iidooyinka ma ahan inay diiradda saaraan gudaha, laakiin sidoo kale dibedda ayaa lagu arki karaa. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay maqaarka wax badan in laga sheego. Dhinac waxay u ekaan doontaa biyo badan. Taas oo ka dhigi doonta mid u ekaata mid jilicsan isla markaana laalaabkeedu xor yahay isla waqtigaas. Marka, xaqiiqdii ma awoodi doontid inaad iska caabbiso iibsashada jacuzzi la buufin karo adoo ogsoon in caafimaadkaaga oo keliya uusan si weyn u fiicnaan doonin, laakiin in waxaas oo dhan dibedda laga arki doono.
Daaweynta gaarka ah ee arthritis
Runtu waxay tahay in qaar ka mid ah cudurada sida nooca lafahaMa haystaan ​​daaweynta ugu saxsan. Taasi waa, waa inaan la noolaano iyaga waqti dheer. Laakiin marwalba waa inaad doorataa xulashooyin fudud si aad awood ugu yeelatid inaad yareyso. Tani waa sababta aan uga hadlayno Jacuzzi. Isku dar biyo iyo kuleyl si kor loogu qaado dhibaatooyinka caafimaad qaarkood, sida aan aragno. Waa run in cudurada raaga ay sii adkaan doonaan laakiin runti sidoo kale mahadnaqa tillaabadan, waan horumarin doonnaa oo waxaan ogaan doonnaa isbeddel wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Jacuzzi la buufin karo: Ma ogtahay waxtarkeeda weyn